Golaha ammaanka oo muddo kordhiyay u sameeyey xafiiska Qaramada Midoobay ee Soomaaliya | XORRIYA NEWS
Home Siyaasadda Golaha ammaanka oo muddo kordhiyay u sameeyey xafiiska Qaramada Midoobay ee Soomaaliya
Golaha ammaanka oo muddo kordhiyay u sameeyey xafiiska Qaramada Midoobay ee Soomaaliya
Codbixinta maanta ee Howlgalka Qaramada Midoobay ee Kaalmaynta Soomaaliya (UNSOM) waxay muujineysaa dadaalka xoogan ee joogtada ah ee Mareykanka iyo bulshada caalamka ee ku aaddan taageeridda nabadda, xasilloonida, iyo horumarka Soomaaliya.
UNSOM ayaa weli ah wadatashi muhiim u ah Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubinta ka ah federaalka si ay u keenaan xasillooni siyaasadeed, amni, iyo xasillooni dhaqaale gobolka Geeska Afrika.
Golaha Amniga ayaa jimcihii meel mariyey qaraar dib loogu cusbooneysiinayo waqtiga howlgalka Howlgalka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya (UNSOM) sanad kale, illaa Agoosto 31, 2021.
Qaraarka 2540, oo ay si wadajir ah u qaateen 15-ka xubnood ee golaha, ayaa ka codsanaya UNSOM inay ilaaliso oo ay xoojiso jiritaankeeda dhammaan dowladaha xubnaha ka ah federaalka ee Soomaaliya, iyada oo la raacayo shuruudaha amniga ee UN-ka iyo sida xaaladda nabadgelyadu oggol tahay.
UNSOM waxaa abuuray Golaha Amniga ee bishii Juun 2013 iyagoo taageeraya Dowladda Federaalka ah. Waxay la shaqaysaa Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya, howlgalka nabad ilaalinta ee ay ansixiyeen Golaha Amniga.